ဆီးဖြူပင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆီးဖြူပင်သည် အပင်ငယ် သို့မဟုတ် အပင်လတ်စား မျိုးဖြစ်သည်။ ရုက္ခဗေဒအလိုအားဖြင့် 'ဖိုင်လင်သပ် အင်ဗလိကာ'ဟု ခေါ်သည်။ သစ်ခေါက်သည် အကြေးများကွာနေသကဲ့ သို့ရှိသည်။ သစ်ခေါက်ရောင်မှာ ရေညိုရောင်ဖြစ်သည်။ အကိုင်း မှထွက်သော အခက်ကလေးများသည် ၄ လက်မမှ ၈ လက်မ အထိရှည်သည်။ အရွက်များသည် လက်မဝက်ခန့်ရှည်၍ ထူထပ်စွာပေါက်ကြသည်။ ပန်းပွင့်အရောင်မှာ ဖက်ဖူးရောင်ဖြစ်သည်။ အသီးသည် အသားပေါ၍ လုံးသည်။ အချင်း ၁/၂ မှ ၁/၄ လက်မအထိရှိပြီး ယင်း၌ ထောင်လိုက် မြောင်းခြောက်မြောင်း ရှိသည်။ အသီးအရောင်မှာ အဝါနုရောင်ဖြစ်သည်။ မှည့်သောအခါ တခါတရံအနီရောင်ရှိသည်။ အရသာမှာ ချဉ်ဖန်ခါး သည်။ အသီးမှည့်ကို ဆားစိမ်၍ ဖြစ်စေ၊ သနပ်လုပ်၍ဖြစ်စေ စားလေ့ရှိကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆီးဖြူပင်များကို တောအရပ်များ၌ တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အစေ့မှမျိုးပွားယူကြ၏။ သို့ရာတွင် အကိုင်းကိုဖြတ်၍လည်း စိုက်ပျိုးနိုင်၏။ ထို့ပြင် မြေထုပ်စည်း၍လည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သေးသည်။ ရခိုင်လို ချချားသီးဟု ခေါ်သည်။ 
ဆီးဖြူသီးသည် အသက်ကို ရှည်စေ၏။ ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာ၊ လေနာတို့ကို ပျောက်ကင်း စေ၏။ သွေးဝမ်းသွားလျှင် ဆီးဖြူသီး အစိမ်းကို ထောင်း၍ အရည် ညှစ်ယူပြီး သံပရာရည်နှင့် သောက်လျှင် ချက်ချင်း သက်သာ ပျောက်ကင်း၏။ ဆီးဖြူသီး အခြောက် (သို့) အစိုကို သွေး၍ သံပရာရည် အနည်းငယ် ထည့်ပြီး အရေပြား ပေါ်တွင် ဖြစ်တက်သော ယားနာ၊ ပွေး၊ ညှင်း၊ တင်းတိပ်များကို လိမ်းပေးနိုင်၏။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏ ခုခံအားကို မြင့်တက် စေ၏။ ဆီးဖြူသီး အခြောက်မှုန့်ကို ထန်းလျက်၊ ပျားရည်၊ သကာရည်တို့နှင့် နယ်စားပါက ဆီးပုပ်ရောဂါ ပျောက်၏။ ဆီးဖြူသီး အခြောက်ကို ငါးရှဉ့်သားနှင့် ချက်စားပါက ဒူလာ သွေးဝမ်းကျ ရောဂါ ပျောက်၏။ ဆီးဖြူသီးကို အညက်ကြိတ်၍ ထိပ်အုံ ပေးပါက နှာခေါင်း သွေးလျှံခြင်း ပျောက်၏။ အရွက်ကို ရေနှင့် သုံးခွက်တခွက်တင် ကျို၍ ရရှိသော အရည်ကို ပလုတ်ကျင်း ပေးခဲ့သော် လျှာကွဲခြင်း၊ ပါးစပ်ကွဲခြင်း၊ ပေါက်ခြင်းနှင့် ရေစီးကမ်းပြိုခြင်းများ တခဏချင်း ပျောက်ကင်း၏။ ဆီးဖြူသီး ရွက်နုများကို ပုံးရည်ဖြင့်ကျွေးခဲ့သော် အစာမကြေခြင်း၊ ဝမ်းသက်ခြင်းများ ပျောက်ကင်း၏။ ဆီးဖြူရွက်ကို ကျွမ်းအောင် လှော်ပြီး အုန်းဆီနှင့် ရော၍ ကလေးများ၌ ဖြစ်တက်သော ကျဗဟုံးနာများကို လိမ်းပေးက ပျောက်၏။ မီးလောင်၊ ရေနွေးပူလောင်သော အနာများတွင် ဆီးဖြူရွက်ကို အကျွမ်းလှော်၍ အမှုန့်ပြုပြီး ဖြူးပေးရ၏။
ပုံသဏ္ဌာန် : အပင် ရွက်ကြွေပင်လတ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပေ ၃၀ ခန့် ထိမြင့်၍ ပင်စည် တွင် အညိုရောင် အပွေးအခေါက်များရှိသည်။ ကိုင်းဖြာသည်။ အရွက် ၂ ခါ ငှက်မွေးရွက်ပေါင်းဖြစ်၍ ရွက်လွှဲထွက်တတ်သည်။ ရွက်မြွာများ ၅၀-၆၀ ခန့်ထိပါရှိ၍ သေးငယ်ပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင် ခပ်စိပ်စိပ် ထွက်၏။ ဆူးပုပ်ရွက်နှင့် တူသော်လည်း ဆူးပုပ်ရွက်ထက် ရွက်ပြား ပိုကြီးပြီး ရှည်၏။ အပွင့် စိမ်းဝါရောင်ဖြစ်သည်။ အဆုပ်လိုက်ပွင့်၍ ပြာသို၊တပို့တွဲတွင်ပွင့်သည်။ အသီး ပြောင်ချော၍ အဝါနုရောင်ရှိသည်။ အသားထူ၍ ဒေါင်လိုက်အမြောင်း ၆ မြောင်းရှိသည်။ အစေ့တစ်ခုသာ ပါဝင်သည်။ တပေါင်း၊ တန်ခူးတွင် သီးသည်။
အသုံးပြုနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ : အသီး ၊ အရွက် ၊ အစေ့။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့နိုင်သောနေရာများ : မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံး၌ ပေါက်ရောက်သည်။ အထူးသဖြင့် အထက် မြန်မာပြည်နှင့် သမအေးပိုင်းဒေသတွင် အမြောက်အမြား ပေါက်ရောက်သည်။ ပေါက်ရောက်ပုံ သဘာ၀အလျောက် ပေါက်ရောက်သည်။ အသုံးဝင်ပုံ : အာနိသင် မြန်မာဆေးကျမ်းများအလိုအရ ဆီးဖြူသီးသည် ချို ၊ ချဉ် ၊ဖန်သော အရသာ ရှိ၏။ အေး၏။ အစာကို ကြေပျက်စေ၏။ ဆီး ၊ ဝမ်းမီး ကို တောက်စေ၏။ ဒေါသ သုံးပါးကိုနိုင်၏။ သွေးကို ဖြစ်စေ၏။ အပူကို ငြိမ်းစေ၏။
ဆီးဖြူသီးသည် အသက်ကိုရှည်စေ၏။ ချောင်းဆိုး ၊ ပန်းနာ၊ လေနာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။
သွေးဝမ်းသွားလျှင် ဆီးဖြူသီးအစိမ်းကို ထောင်း၍ အရည်ညှစ် ယူပြီး သံပရာရည်နှင့် သောက်လျှင် ချက်ချင်းသက်သာ ပျောက်ကင်းစေသည်။
ဆီးဖြူသီးအခြောက် သို့မဟုတ် အစိုကို သွေး၍ သံပရာရည် အနည်းငယ်ထည့်ပြီး အရေပြားပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ယားယံနာ၊ ပွေးညှင်း၊ တင်းတိပ်များကို လိမ်းပေးက ပျောက်၏။
ဆီးဖြူသီးခြောက်မှုန့်ကို ထန်းလျက်၊ပျားရည်၊ သကာရည်နှင့် နယ်စားက ဆီးပုပ်ရောဂါ ပျောက်၏။
ဆီးဖြူသီးခြောက်ကို ငါးရှဉ့်သားနှင့် ချက်စားက ဒူလာ သွေးဝမ်းကျ ရောဂါ ပျောက်၏။
ဆီးဖြူသီးကို အညက်ကြိတ်၍ ထိပ်က အုံပေးပါက နှာခေါင်းသွေးလျှံ ခြင်း ပျောက်၏။
တောဆီးဖြူ သို့မဟုတ် တောင်ဆီးဖြူ၊ မြေဆီးဖြူ ပဉ္စငါးပါး ပြုတ်သောက်က ဆီးချိုရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။
အရွက်ကို ရေနှင့် သုံးခွက်တခွက်တင် ကျို၍ ရရှိသော အရည်ကို ပလုတ်ကျင်းပေးခဲ့သော် လျှာကွဲခြင်း၊ ပါးစပ်ကွဲခြင်း၊ ပေါက်ခြင်းနှင့် ရေစီးကမ်းပြိုဖြစ်ခြင်းများ တခဏချင်း ပျောက်ကင်း၏။
ဆီးဖြူရွက်နုများကို ပုန်းရည်ဖြင့် ကျွေးခဲ့သော် အစာမကြေခြင်း၊ဝမ်းသက်ခြင်းများ ပျောက်ကင်း၏။
ဆီးဖြူရွက်ကို ကျွမ်းအောင် လှော်ပြီး အုန်းဆီနှင့် ရော၍ ကလေးများ၌ ဖြစ်တတ်သော ကျဗဟုံးနာများကို လိမ်းပေးက ပျောက်၏။
မီးလောင်၊ ရေနွေးပူလောင်သော အနာများတွင် ဆီးဖြူရွက်ကို အကျွမ်းလှော်၍ အမှုန့်ပြုပြီး ဖြူးပေးရ၏။
အစေ့ကို ထုထောင်းခြေပြီးလျှင် ရေနွေးနှင့် ပြုတ်၍ မျက်စိကို ဆေးကြောပေးသော် မျက်စိ၌ ဖြစ်သောရောဂါများ ပျောက်ကင်း သက်သာစေနိုင်၏။
↑ Roland, C. (2020). "Phyllanthus emblica". IUCN Red List of Threatened Species 2020. IUCN.
↑ "Phyllanthus emblica"၊ Germplasm Resources Information Network (GRIN)၊ Agricultural Research Service (ARS), United States Department of Agriculture (USDA)၊ 2008-03-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
↑ The Plant List: A Working List of All Plant Species။9November 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9November 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆီးဖြူပင်&oldid=738849" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ မတ် ၂၀၂၂၊ ၁၈:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။